Klingon Empire Darsek စျေး - အွန်လိုင်း KED ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Klingon Empire Darsek (KED)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Klingon Empire Darsek (KED) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Klingon Empire Darsek ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $48 747.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Klingon Empire Darsek တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Klingon Empire Darsek များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Klingon Empire DarsekKED သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000924Klingon Empire DarsekKED သို့ ယူရိုEUR€0.000785Klingon Empire DarsekKED သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000708Klingon Empire DarsekKED သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000845Klingon Empire DarsekKED သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00837Klingon Empire DarsekKED သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00585Klingon Empire DarsekKED သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0207Klingon Empire DarsekKED သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00346Klingon Empire DarsekKED သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00124Klingon Empire DarsekKED သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00129Klingon Empire DarsekKED သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0207Klingon Empire DarsekKED သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00716Klingon Empire DarsekKED သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00501Klingon Empire DarsekKED သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0693Klingon Empire DarsekKED သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.155Klingon Empire DarsekKED သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00127Klingon Empire DarsekKED သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0014Klingon Empire DarsekKED သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0288Klingon Empire DarsekKED သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00644Klingon Empire DarsekKED သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0979Klingon Empire DarsekKED သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.1Klingon Empire DarsekKED သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.35Klingon Empire DarsekKED သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0682Klingon Empire DarsekKED သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0255
Klingon Empire DarsekKED သို့ BitcoinBTC0.00000008 Klingon Empire DarsekKED သို့ EthereumETH0.000002 Klingon Empire DarsekKED သို့ LitecoinLTC0.00002 Klingon Empire DarsekKED သို့ DigitalCashDASH0.00001 Klingon Empire DarsekKED သို့ MoneroXMR0.00001 Klingon Empire DarsekKED သို့ NxtNXT0.0658 Klingon Empire DarsekKED သို့ Ethereum ClassicETC0.000135 Klingon Empire DarsekKED သို့ DogecoinDOGE0.267 Klingon Empire DarsekKED သို့ ZCashZEC0.00001 Klingon Empire DarsekKED သို့ BitsharesBTS0.0362 Klingon Empire DarsekKED သို့ DigiByteDGB0.0347 Klingon Empire DarsekKED သို့ RippleXRP0.00319 Klingon Empire DarsekKED သို့ BitcoinDarkBTCD0.00003 Klingon Empire DarsekKED သို့ PeerCoinPPC0.0032 Klingon Empire DarsekKED သို့ CraigsCoinCRAIG0.421 Klingon Empire DarsekKED သို့ BitstakeXBS0.0394 Klingon Empire DarsekKED သို့ PayCoinXPY0.0161 Klingon Empire DarsekKED သို့ ProsperCoinPRC0.116 Klingon Empire DarsekKED သို့ YbCoinYBC0.0000005 Klingon Empire DarsekKED သို့ DarkKushDANK0.296 Klingon Empire DarsekKED သို့ GiveCoinGIVE2 Klingon Empire DarsekKED သို့ KoboCoinKOBO0.217 Klingon Empire DarsekKED သို့ DarkTokenDT0.000851 Klingon Empire DarsekKED သို့ CETUS CoinCETI2.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 17:55:02 +0000.